Qaxootiga dhadhaab oo ka digay macaluul xili hay?adaha gargaarku dhimayaan raashinka la siiyo – Radio Daljir
Nofeembar 2, 2013 4:15 b 0
Dhadhaab, November 2, 2013 – Qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyey hadal shalay ka soo yeeray hay?ada cunnada aduunka ee WFP iyo weliba hay?ada qaxootiga aduunka ee UNHCR, kaas oo lagu sheegay in la dhimayo saamiga raashinka la siiyo qaxootiga.
Odoyaasha iyo dadka danyarta ah ee ku jira xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in xaaladu tahay mid aad u liidata, qaar ka mid ah odoyaasha oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in nolol xumo iyo raashin yaraan ay jirto.
Qoraal ka soo baxay WFP ayaa lagu sheegay shalay in hoos loo dhigayo %25 boqolkiiba raashinka la siin jiray dadka Soomaalida ah ee ku jira xeryaha, hay?adaha ayaa sababta arintaas ku sheegay lacagta laga heli jiray dalalka deeqda bixiya oo yaraatay.
?Qaramada midoobey waxaan ka dalbanaynaa in ay go?aankaas bedelaan, maaha wax anfacaya dadka danyarta ah ee ku jira xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya waa dad aad u liita oo aan lahayn meel kale oo ?ay wax ka soo galaan.? Ayuu yiri Cilmi Geedi oo ka mid ah odoyaasha dhadhaab.
Nolosha adag ee soo wajahaysa dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha Dhadhaab ayaa sahlaysa sida la sheegay in ay dad badan dib ugu soo noqdaan Soomaaliya oo qaarkood aysan waxba kaga horayn, war-baahinta ayaa? sheegay in go?aanka hay?adaha si wayn looga dareemay xeryaha.